Ny tsy fitoviana ao ambadik'ilay fe-potoana iombonan'ny fiaraha-miasa
Fanazaran-tena Qi Gong fanta-daza
Izay liana amin'ny haiady Aziatika amin'izao fotoana izao dia hahita izany haingana. Tsara ny famatsiana, toy ny tinady. Saingy tsy toy ny, ohatra, ny Aikido Japoney, ny Gong Fu sinoa na Kung Fu dia manana tombony sasany. Satria ny kanton'ny Kung Fu - na ny Buddhist Shaolin na ny Daoist Wudang Kung Fu - dia misy zavatra tsy hita amin'ny haiady hafa. Qi Gong no iantsoana azy.
Qi Gong - ny karazana fampiharana ara-pahasalamana sinoa
Ny fototry ny Qi Gong - © Руслан Галиуллин / Adobe Stock
Inona ny Qi Gong? Qi Gong dia teny iraisana izay noforonina tamin'ny taona 1950. Tafiditra ao anatin'izany ny fanazaran-tena rehetra izay mitaona sy manamafy ny Qi, ny angovo fiainana. Betsaka amin'ireo fanazaran-tena efa mihoatra ny arivo taona. Ireo moanina avy amin'ny monasiteran'ny Buddhist sy Daoist teo aloha dia efa nanao fanazaran-tena.
Qi Gong dia tsy mitana andraikitra lehibe amin'ny haiady mahery vaika sinoa, fa amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa, na TCM raha fintinina. Izy io no mandrafitra ny iray amin'ireo andry dimy iorenan'ny TCM.
Ao amin'ny Qi Gong, misy lafiny samihafa mitambatra hamorona singa. Anisan'izany ny fialan-tsasatra, fitoniana ary voajanahary, ary koa ny fihetsehana, ny fifohana rivotra ary ny fisaintsainana. Mifanohitra amin'ny fisaintsainana, ny hetsika dia ampifandraisina amin'ny fialan-tsasatra. Miaina miaraka ny miaina, mihetsika ny mihetsika ary miadana.
Na dia misy fe-potoana iray aza hiarahana manao fanazaran-tena rehetra, Qi Gong dia tena isan-karazany. Ny isan'ny tena fanazaran-tena Qi Gong dia tsy fantatra. Ny fanazaran-tena marobe dia azo hazavaina amin'ny fanao maro nandritra ny taonjato maro. Ny masters any Sina taloha dia nampita ny rafitry ny fampiharana azy ireo ihany tamin'ny mpianany. Ireo kosa dia nanova azy io ary namolavola ny fomba fiasan'izy ireo manokana. Araka ny nahalalana azy tany amin'ny firenena tandrefana, hevitra vaovao marobe no nampiana mba hanamora ny fidiran'ny be sy ny maro an'i Eropa sy Amerika ity endrika fisaintsainana ity.
Na eo aza ny karazany maro dia samy manana tanjona iray ny fanazaran-tena Qi Gong rehetra: ny fandanjana ny Qi ao amin'ny vatana. Na izany aza, tsy maninona izay fanazaran-tena ataonao. Ny fanazaran-tena tsirairay dia mifandraika amin'ny fantsona angovo sasany, ny meridian, ao amin'ny vatan'olombelona. Noho izany, hafa ny vokatry ny fanazaran-tena.
Avy amin'ny fampianaran'ny TCM dia mipoitra fa tsy misy karazana Qi iray fotsiny, fa maromaro: ny Qi miaina, ny fiarovana Qi, ny sakafo Qi, ny fantsona Qi, ary ny taova Qi, izay mizara roa ho an'ny tsirairay dia mizara. Ny karazan-Qi rehetra dia mety hahatratra ny tsy fitoviana, izay azo averina indray mandanjalanja. Na izany aza, mila izany ny fanatanjahan-tena mety amin'ny tsy fitoviana tsy voatendry.
Toy ny fitsipika, Qi Gong dia ampianarina amin'ny fomba azo ampiharina tsy misy fahalalàna ny lamina tsy fitovizan'ny tena manokana. Ny Qi Gong izay nampianarina tany amin'ny sekolin'ny haiady koa dia mikendry ny hampifandanja ny Qi an'ny mpianatra, ka lasa matanjaka sy mahery ny fanatanterahana Kung Fu.
Ny fanazaran-tena Qi Gong sasany dia nahavita fahatsiarovan-tena ary noho izany dia ampianarina matetika. Anisan'izany ny fampihetseham-batana valo, ny hetsiky ny 18 an'ny Taiji Qigon, Ba Fanhuangong, Chan Mi Gong, meditasi folo, taova 5 Qigong, ny lalao biby 5 na ny meridian Qigong.
Ny karazany dia tsy mitovy amin'ny vokatry sy ny filaharan'ny fanazaran-tena ihany, fa koa amin'ny niandohany. Toy ny Kung Fu, Qi Gong koa dia voataonan'ireo fivavahana sinoa lehibe Buddhism sy Daoism. Ao amin'ny monasiteran'ny Daoist ao Wudang-Shan dia tsy hampianarina an'i Buddhist Shaolin Qi Gong ianao na ny mifamadika amin'izany.
Ohatra iray amin'ny Qi Gong bodista ny Chan Mi Gong. Ity dia fantatra koa amin'ny hoe qigong hazondamosina. Amin'ity endrika ity, ny hazondamosina dia afindra amin'ny alàlan'ny fanentanana toy ny onja. Ny hetsika dia ampitaina amin'ny vatana iray manontolo.
Ohatra iray amin'ny Daoist Qi Gong ny folo fisaintsainana avy amin'ny Mount Wudang. Ity fanazaran-tena ity dia mifantoka amin'ny fitsipiky ny Daoist amin'ny fifandanjana ny mifanohitra amin'izany. Ny fanazaran-tena afovoany dia ny hoe "Misokatra ny voninkazo lotus", izay tsy voafetra ho an'ny asa ara-batana fotsiny, fa misy koa lafiny ara-panahy.
Mba hahafantarana tsara ny fitaovan'ny Qi Gong dia mila traikefa sy fampiharana be dia be izany. Ny zavakanto sinoa misaintsaina sy mihetsika dia tsy mitovy arakaraka ny taona aelin'ny fampandrosoana sy ny haben'ny Shina. Na izany aza, ny karazana rehetra dia mety amin'ny vao manomboka. Amin'ny farany, ny fanazaran-tena rehetra dia manana tanjona iraisana: ny fifandanjana mirindra an'i Qi ao anaty.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 28. May 2020 15. Jolay 2021 Sokajy LifestyleKeywords fisaintsainana, Saintsaino, Qi Gong
indray Lahatsoratra taloha: Fialantsasatra miaraka amin'ny fianakaviana
more Lahatsoratra manaraka: Karaiba | Dia fitsangatsanganana